Farmaajo iyo Uhuru oo 'wada-hadallo yeeshay'
Farmaajo, Uhuru iyo Sisi
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxa uu wada-hadallo “la isku fahmay” kula yeeshay magaalada New York oo ay u joogaan ka qeyb-galka shirka Golaha Guud ee QM, sida ay sheegtay Villa Somalia.
“Waxaa la isku raacay in xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.” Ayaa lagu yiri qoraalka Villa Somalia.
Wasiirka arrimaha dibedda Kenya, Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ku xaqiijisay in kulan saddex geesood ah ay yeesheen Farmaajo, Uhuru Kenyatta iyo Al-Sisi.
“Kenya waxay soo dhoweeneysaa kulankan koowaad oo ah tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Kenya waxay mar walba rumeysneyd, ayna sii wadeysaa inay ku baaqdo in wada-xaajoodyadu ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka Afrika loogu heli karo xal Afrikaan” Ayey tiri.